DOWNLOAD thousand Mi-26 FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 16 027
Munyori: Alphasim, Vladimir Zhyhulskiy, Michael Pook http://www.virtavia.com
The pasuru chinoratidza kugadziriswa akapedza VC itsva uye 2D emadziro, sezvo default VC ndisina basa gauges uye akanga asina kururama bitmap ari unaku folders, saka kuti kuruboshwe VC chikamu uye kodzero uye vakasiya pamakona akanga chena.
Zvinoitawo ine itsva 2D emadziro, pakutanga akasika Vladimir Zhyhulskiy wake FSX shanduro, asi ikozvino zvakachinjwa kuti anoenderana VC. The pasuru rinewo okuwedzera utsi migumisiro. New VC uye 2D remadziro magadzirirwo uye configuration Michael Pook. Model kubudikidza Alphasim.
The thousand Mi-26 (Russian: Миль Ми-26, NATO vaishuma zita: denderedzwa rechiedza), vakapiwa chigadzirwa remitemo izdeliye 90, ndiko Soviet / Russian rinorema chokufambisa neherikoputa. Mubasa chete rehurumende uye vemauto dzaishandisa, ndicho chikuru uye simba zvikuru neherikoputa nokusingaperi kuti vamene kugadzirwa.
Design: Mune 1970s, Soviet Union aida kupa mutsivi kuna Mi-6 asi dzakakwirira zvikuru unongotaura. A zvikabva chokutanga ipapo akavaka, kutanga vakamhanyira December 14 1977 miedzo Operational muuto reSoviet akatanga muna mangwanani 1982, yakapinda basa gore rakatevera. February 3, 1982, iye akasimbisa zvinoverengeka nyika zvinyorwa, kusanganisira nendege panguva kunonyanyisa uremu (vakaremedzwa) of 56,769 KG kuti 2,000 mamita. (Wikipedia)
Thousand Mi-26 FSX & P3D Download
Downloads: 24 027